Telefoonada ugu fiican ee Android: tijaabooyinka, bilaabista, xanta ... | Androidsis (Bogga 32)
Ku beddel Apple iPhone asalka ah Xiaomi Mi Note
Waxaan u beddelay Apple iPhone Xiaomi Mi note, xaaladdu wax macno ah ma lahan. Tani waa sida xoogan ee loo cadeeyo weerarka cusub ee Xiaomi ee lagu raadinayo macaamiisha tufaaxa qaniinay.
Waa maxay terminaalka Android ee aad ugu jeceshahay? Kuwani waa dookhayga shaqsiyeed
Halkan waxaad ku haysaa liistadayda ugu xiisaha badan ee loo yaqaan 'Android terminals', oo ah liistada inta badan aan kula taliyo saaxiibbaday iyo inta i garaneysa markay i weydiistaan ​​talo ku saabsan nooca casriga ah ee loo yaqaan 'Smartphone' ee aan iibsado.
Google Nexus Player waxaa laga heli karaa Amazon Spain 169 Euros
Nexus Player, qalabka fiidiyoowga ee Google waxaa laga iibsan karaa Amazon Spain 169 euro.
HTC Desire 626, ma lagu soo bandhigi doonaa MWC 2015?
Sawiradii ugu horreeyay ee HTC Desire 626, xubinta cusub ee qoyska Rabitaanka ee soosaaraha Taiwanese, ayaa la dusiyay
Shaandheeyey sawirka OPPO Find 9 oo tilmaamaya inuu raacayo isla qaabkii naqshadda ee lagu arkay OPPO Find 7 ee hore.
Xiaomi ayaa ku qoslaysa Apple xayeysiis cusub oo runtii qosol badan
Xiaomi ayaa soo saartay muuqaal qosol badan oo kaftan ah kamaradda iPhone 6 Plus, oo ka soo baxda dhabarka qalabka
Huawei P8 bisha Abriil oo leh shaashad 5.2-inji ah iyo 3GB oo RAM ah
Shaashadda 5,2-inch 1080p ee Huawei P8 ayaa kuu oggolaan doonta inaad haysato nolol batteri wanaagsan oo soo socota wixii ka dambeeyay Xperia Z3
Muxuu Xiaomi u iibiyaa si raqiis ah?
Sababaha sababta soo saaraha Aasiya Xiaomi uu u yahay mid jaban marka loo eego tartamayaasha ugu waaweyn.
Beddelka Xiaomi Redmi 2 miyuu xitaa ka sii fiicnaan doonaa qiimaha lacagta?
In kasta oo bandhigyadii ugu dambeeyay ee Xiaomi ay saameyn ku yeesheen, beddelka Red Mi 2 wuu sameyn karaa xitaa intaa ka sii badan, taas oo xitaa ka raqiisan oo tayo leh.
Sony Xperia Z4 wuxuu maraa FCC
Waxaan si dhab ah u ogaaneynaa in soo saaraha Japan uu soo bandhigi doono noocyadiisa cusub ee calanka inta lagu gudajiro Shirka Caalamiga ah ee Moobilada ee lagu qaban doono usbuuca ugu horeeya bisha Maarso magaalada Barcelona. Waanuna xaqiijin karnaa in Sony Xperia Z4 ay soo martay laba wakaaladood oo shahaado oo kala duwan ah.
Taariikhaha la cusbooneysiiyay ee loogu talagalay Android 5.0 dhammaan noocyada HTC waa la sifeeyaa
Taariikhaha ay qalabka HTC ee iswaafajinaya heli doonaan casriyeynta muddada dheer la sugayay ee ku saabsan Android 5.0 L ayaa la soo daayay.
Maxaan ugu maleynayaa in Xiaomi Mi Note Pro ay ka fiican tahay Samsung Galaxy Note 4
Qodobka muujinaya astaamaha Mi Note Pro ee aan ku seegnay Samsung Galaxy Note 4
Waxaan tijaabinay NGS Odysea 500QHD, Quad Core oo ah 129 euro VAT oo lagu daray
Maanta waxaan soo bandhigeynaa NGS Odysea 500QHD, oo ah Android 4.4.2 Kit Kat smartphone oo leh quad-core MKT 6582M processor iyo 1 Gb oo RAM ah oo kaliya 129 Euros oo ay kujiraan VAT.
Waxaan horeyba u haysannay tusaalooyinka ugu horreeya ee sawirro laga qaado Mi Note
Waxaan horeyba uheysanay tusaalooyinkii uguhoreeyay ee sawirro lagusameeyay kamaradda aagga cusub ee Xiaomi Mi Note
Xiaomi Mi Note Pro oo leh shaashad Quad HD 5,7-inch ah, Snapdragon 810 chip iyo 4GB oo RAM ah
Si ka duwan Mi Note, Mi Note Pro wuxuu leeyahay qalab Snapdragon 810, processor weyn oo loogu talagalay taleefanka ugu awoodda badan suuqa hadda.
Xiaomi wuxuu ku dhawaaqay Mi Note oo leh shaashad 5,7-inji ah, 3GB oo RAM ah iyo Snapdragon 801 chip
Xiaomi ayaa ugu dambeyntii maanta ku dhawaaqday Xiaomi Mi Note cusub oo leh shaashad 4,7-inji ah, 3GB oo RAM ah iyo Snapdragon 801 chip
Oppo wuxuu ku dhawaaqay Mirror 3, taleefan hoose oo 64-bit ah
Oppo wuxuu ku dhawaaqayaa taleefan kale oo 64-bit ah laakiin loogu talagalay dhamaadka-hoose, si sax ah Oppo Mirror 3
HTC One M8 Developer Edition wuxuu durbaba helayaa Android 5.0 L
The HTC One M8 Developer Edition ayaa durbaba helaya casriyeyntii muddada dheer la sugayay ee Android 5.0. Taasi waxay ka dhigan tahay inay dhowaan daahfuri doonaan OTA oo loogu talagalay soo-saaraha Taiwan-ka ee loo yaqaan 'One range'.
[APK] Launcher IdeaDesktop, Launcher-ka Lenovo ee dhammaan Android 4.0 ama wixii ka sareeya
Halkaan ayaan ka tagayaa, waxaan u mahadcelinayaa XDA, Lenovo Launcher oo loogu talagalay rakibidda wixii Android 4.0 ah ama ka sareeya.
Android Fake: Mashruuca Taleefanka casriga ah ee jilicsan ee la aqbali karo
Maanta waxaan rabaa inaan kuusoo bandhigo arrinta cajiibka ah ee Smartphone jilicsan, oo ah 6 "cabir Smartphone ah oo aan si dhuumaaleysi ah ugu xiran karno sida Android Smartwatch.
LG's Smart Wine, oo ah Android 4.4.4 KitKat oo leh hawo retro ah
LG's Smart Wine waa terminal Android gabi ahaanba ka duwan wixii aan ilaa hadda aragnay, terminal na xasuusinaya ama noo qaadaya casrigii dahabiga ahaa ee taleefanka gacanta.
Elephone G6, taleefan casri ah oo leh processor 8-core ah iyo dareeraha faraha oo leh qiime aad u macquul ah: 115 euro
Haddii aad raadineyso taleefan casri ah oo awood badan leh, Elephone G6 waa ikhtiyaar inaad tixgeliso